ကာတာလခြမ်းနီ အဖွဲ့မှ ရခိုင်မှ ဒုက္ခသည်များ အတွက် အိမ်ယာ စီမံကိန်းများ တည်ဆောက်ပေးမည် | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ကာတာလခြမ်းနီ အဖွဲ့မှ ရခိုင်မှ ဒုက္ခသည်များ အတွက် အိမ်ယာ စီမံကိန်းများ တည်ဆောက်ပေးမည်
Posted: 27 Feb 2013 09:22 AM PST
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ ၊ ၂၀၁၃
ဒိုဟာ။ ။ ကာတာအခြေစိုက် လခြမ်းနီအဖွဲ့မှ အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၄၈၀ (လူပေါင်း ၃၀၀၀ခန့်) ကို ပြန်လည်နေရာချထားပေးရန် အခန်းပေါင်း စုစုပေါင်း ၄၈၀ ပါဝင်သည့် အိမ်ယာဝင်း ၆၀ ကို မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဆောက်လုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ကာတာသတင်းအေဂျင်စီမှ သတင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ QRC လုပ်ငန်းဌာနမှ လုပ်ဆောင်မည့် ဤပရောဂျက်တွင် အိမ်ယာဝင်းပေါင်း (၆၀)ကျော် ပါဝင်မည် ဖြစ်ပြီး ၀င်းတစ်ခုစီတွင် အိမ်ပေါင်း (၈)ခန်းပါဝင်ကာ ရေတုံကင်တစ်ခု စီပါဝင်မည် ဖြစ်သည်။ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းသည် ပြီးခဲ့သော ဇန်န၀ါရီလက စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကာ ပတ်ဝန်းကျင် အနီးတ၀ိုက်ရှိ စခန်းများမှ အလုပ်သမား နှင့် လုပ်ငန်းကျွမ်းဝင်သူပေါင်း ၂၅၀၀ကျော်လည်း လုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။
ပုံမှန်အားဖြင့် ဧပြီလအစောပိုင်းတွင် ကျရောက်လေ့ရှိသော မိုးရာသီကာလ မတိုင်မီ မတ်လဆန်းတွင် အိမ်ယာများကို အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများထံ လွှဲပြောင်းပေးသွားမည်ဟု မျှော်မှန်းထားပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ QRC ၏ လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင် ရုံးခန်းသည် လက်တွေ့လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အရည်အသွေး ပြည့်မီမှုများနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး စဉ်ဆက်မပြတ် ညွှန်ကြားစီမံနေပြီး ပရောဂျက် ပြီးမြောက်အောင်မြင်မှုများ ၊လိုအပ်ချက်ရှိသော လူများအား ထောက်ပံ့ကူညီမှုများ ပေးအပ်ခြင်းတို့အား စောင့်ကြည့်ကွပ်ကဲလျက်ရှိသည်။
QRC သည် ရခိုင်ဒေသအတွင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော အကြမ်းဖက်မှုများကြောင့် ပြောင်းရွှေ့ခြင်းခံရသူများ ပြန်လည် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာရေး ကိစ္စရပ်များ လုပ်ဆောင်ရန် မြန်မာ့ကြက်ခြေနီ အဖွဲ့အစည်းနှင့် နှစ်နှစ်ကြာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး သဘောတူညီမှု တစ်ရပ်အား စက်တင်ဘာလအတွင်း လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
This entry was posted on February 28, 2013, in နိုင်ငံတကာသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← လူမျိုးစု ၁၃၅ မျိုးနှင့်ပတ်သက်၍ မည်သည့် အစိုးရ လက်ထက်တွင် စာရင်းပြုစုပြီး ရရှိလာခဲ့သည်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်‌မေးခွန်း”ကို ပြန်လည်ဖြေကြား . ..	အစ္စလာမ် အထက်တန်းကျောင်းများသည် ဗြိတိန်၌ အကောင်းဆုံး ထိပ်တန်းစာရင်းဝင် ကျောင်းများဖြစ်လာ →